Ajuju Ajuju Ajuju Ji Ajuju na Azịza | Martech Zone
Ajuju Ajuju Ajuju Ajuju juo ma zaa
Ihe omuma ihe omuma a sitere na AboutUs bu ihe omuma nke oma nke ajuju anyi kwesiri iju dika ndi ahia ahia. N'ihe banyere post a, aga m aza ajụjụ ndị a:
onye - ebumnuche anyị bụ ndị na-ere ahịa ọdịnaya na etiti.
Kedu - akwukwo ozi a na ajuju ndi mbu ahia gi kwesiri iza.
ebe - anyị ga-ebipụta akwụkwọ ozi ebe a ma kesaa ya na ntanetị ọhaneze, gụnyere Pinterest na StumbleUpon.
Mgbe ole - anyị na-achọ ibipụta na etiti ụtụtụ iji jikọta ọnụ ọgụgụ dị elu nke ndị na-agụ akwụkwọ n'ofe mba ahụ.
Gịnị mere - A maara saịtị anyị maka ịkekọrịta nnukwu ihe ọmụma ahịa ahịa ma ghọọrọ ha ụdị ọrụ.
Kedu - ịkesa ihe omuma a sitere na AboutUs na-enye ndi ahia ahia ihe di egwu maka imeputa uzo ha. Aga m aga na Nzọụkwụ 7 nke Na-achọ Ọdịnaya na-esote iji mepụta atụmatụ zuru ezu!
Tags: gbasara anyịọdịnaya gbara ọkpụrụkpụọdịnaya ọdịnayacontent Marketingọdịnaya ahịa ahịa ọdịnayaotúahịa infographicKedumgbe oleebeonyeya mere
Nzọụkwụ 7 maka Ebumnuche Mgbakwunye Ọdịnaya
Poken: Mmezi ịkparịta ụka n'atntanet na Ihe Omume
Sep 1, 2014 na 3:02 PM
Ọ ga-afọ nke nta ka m rụọ ụka na njedebe ikpeazụ (iji kụọ onye a na ogige ahụ) ga-abụ ịgwa mmadụ okwu 1-1 iji mee ka ọ dị ala. Enyi m mere nke a na Matthew Bucher - onye guzobere ụlọ ọrụ njikwa ihe ịga nke ọma site na ala